Aleo miteny sy mihetsika… | NewsMada
Aleo miteny sy mihetsika…
Mby aiza ny hoe fanovana amin’izao? Na ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanatsarana ahay ny fiainam-bahoaka. Eo ny tsirairay mitsara izay tsapany sy iainany isan’andro: efa misy fanafana izay manahirana isan’andro vaky izay ela izay? Eo ny tsy fandriampahalemana, ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa… An-tanàn-dehibe, manginy fotsiny ny olana amin’ny famatsian-jiro sy rano.
Ny mahavalalanina sy mahafanina, misy, ohatra, ny mponina miforitra sy mangina an-taonany maro. Nahoana? Na mijaly amin’ny famatsian-drano aza, ohatra, ny fokontany na faritra iray: mila tsy ho fantatra, raha tsy amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna izao. Nahoana no tsy miteny sy tsy mihetsika? Tsy misy mihaino sy mijery…
Tarazo hatramin’izay ny hoe izay tonga eo tompoina? Amin’ny fandraisan’ny vahoaka ny fanjakana io. Mbola izay ihany ny fifandraisan’ny entina sy ny mpitondra? Eny, na eo aza ny hoe ampindramin’ny vahoaka fahefana ny mpitondra… hanompo vahoaka fa tsy hotompoina. Lazaina fa hendry ny vahoaka rehefa mangina sy tsy mihetsika. Tsy inona fa miaritra fotsiny izay manjo.
Mby aiza amin’izany ny hoe: miainga amin’ny hetahetam-bahoaka ny fampandrosoana? Mila miteny sy mihetsika hatrany amin’izay manahirana azy sy ny hetahetany hatrany ny vahoaka ifotony, fa izay no nampindramany fahefana ny mpitondra. Tsy maintsy mizaka sy mitady vahaolana amin’izay koa ny mpitondra. Fahefana nomena azy izany tamin’ny fifanarahana sosialy tamin’ny fifidianana.
Ny fitarainana tsy midika hoe fitsikerana, ny fihetsehana tsy ianjerana na azera any amin’ny hoe fanakorontanana; eny, soketaina sy tsaraina ambony ihany hoe fanonganam-panjakana. Tsara ifamarafarana izay, fa ny tsy fahatokisan-tena na ny fifampiahiahiana ny amin’izany no mampisy elanelana be eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra… mahalavitra ho azy ny fampandrosoana tian-katao.
Tsy misy mahalala ny ao am-po tsy miloatra, fa izay miteny no re ary izay mihetsika no hita. Sao tsy mifampihaino sy tsy mifankahita lava eto…